एल्सा पुनसेट: हामी तपाईंलाई पढ्न सिफारिस गर्छौं वर्तमान साहित्य
एल्सा Punset: हामी सिफारिस पुस्तकहरु
एनकर्नी आर्कोया | | धेरै
स्पेनमा, साहित्य मन पराउने थोरै मानिसहरूले एल्सा पुनसेटको बारेमा सुनेका छैनन्। यो प्रकाशित पुस्तकहरु दिन वा हप्ता को मामला मा पहिलो संस्करण को बाहिर चलाउन। वास्तवमा, हामी भन्न सक्दछौं कि गलत हुन डराउनुपर्दैन कि एल्सा पुनसेट स्पेनमा र पनि विश्वमा भावनात्मक बुद्धिमताका सबैभन्दा विशिष्ट लेखक हुन्। तपाईंले पढ्नुभएका अरू जस्तो नभएका उनका पुस्तकहरू उत्कृष्ट दर्जाका रूपमा दर्जा दिइन्छ किनकि उहाँ सीधै (र बोरिoringले) सिकाउनुहुन्न तर रूपक र कथाहरू जसले तपाईंलाई सोच्न र बुझ्नको लागि रोक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईं सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ भने, तपाईं गर्नुहुन्छ बुझ्दैन।
तर, एल्सा पुनसेट को हो? तपाईले कुन पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ? यहाँ हामी तपाईं लाई हुन सक्ने सबै शंका को स्पष्ट पार्दछौं।
1 जो एल्सा Punset छ
2 एल्सा पुनसेट: पुस्तकहरू जुन यसको लागि लायक हुन्छन्
2.1 एल्सा पुनसेट पुस्तकहरू: माली सिंह
2.2 कडा, निःशुल्क र घुमन्ते: असाधारण समयमा बाँच्नका लागि प्रस्तावहरू
2.3 सानो क्रान्तिहरूको पुस्तक
2.4 एल्सा पुनसेट पुस्तकहरू: ब्रह्माण्डको लागि एक ब्याकप्याक
2.5 खजानाको खोजीमा डेयरडेभिलहरू
2.6 एल्सा पुनसेट पुस्तकहरू: शुभ संध्या, बोबिब्ले!
जो एल्सा Punset छ
एल्सा पुनसेटको जीवनी हामीलाई लन्डनमा लग्छ। उहाँ s० को दशकमा विशेष गरी १ 60 in1964 मा जन्मनुभएको थियो; यद्यपि त्यहाँ जन्मिए पनि उनले आफ्नो जीवन संयुक्त राज्य अमेरिका र म्याड्रिडमा बिताए। उनका बुबा एडुआर्डो पुन्सेत प्रख्यात वैज्ञानिक लोकप्रिय थिए र यो कुरा स्पष्ट छ कि उनले यो सम्पदा पाएका थिए।
आफ्नो जीवन भर मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट दर्शन र पत्रमा स्नातक, र उनीसँग मानविकीमा स्नातकोत्तर डिग्री छ, अर्को पत्रकारिता (माड्रिड विश्वविद्यालयमा पछि) र माद्रिदको क्यामिलो जोसे सेला विश्वविद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षामा तेस्रो।
उनको साहित्यिक जीवन सुरु भयो रेडिकल इनोन्सेंस, भावनात्मक नाविकहरूका लागि कम्पास र ब्रह्माण्डका लागि एक बैकप्याक (हाम्रा भावनाहरू अनुभव गर्ने २१ मार्ग) बाट। ती सबै मध्ये, अन्तिम दुई सबैभन्दा सफल थिए, यद्यपि उना ब्याकप्याक पारा एल् यूनिभानो एक बेस्टसेलर भयो र उसले १ and संस्करणमा १ 21०,००० भन्दा बढी प्रतिलिपिहरू बिक्री गरेको छ, स्पेनमा मात्र होइन, देशबाहिर पनि: जापान, इटाली, ग्रीस, मेक्सिको ...
En २०१२ ले बच्चाहरूमा केन्द्रित एउटा किताबको सुरुवात गर्‍यो, गार्डनर लायन, ठूलो सफलता संग। वास्तवमा, २०१ 2015 मा उनले "लस अरेभिडोस" भनिने सचित्र कथाहरूको संग्रह सुरू गरे, र बच्चाहरूलाई उनीहरूको भावनाहरूसँग डिल गर्न मद्दत पुर्‍याए। यसैले, तपाई भावनाहरू जस्तै खुशी, आत्म-सम्मान, दु: ख, डर, आदि पाउन सक्नुहुन्छ।
२०१ latest मा प्रकाशित उनका पुस्तकहरू द लिटिल रिभोल्युसनहरू मध्ये एक हो जुन महिनौंका लागि गैर-फिक्शन बेस्टसेलर सूचीमा थियो। अहिले कडा, नि: शुल्क र घुमन्ते: असाधारण टाइम्समा बाँच्ने प्रस्ताव प्रकाशित गरेको छ।
लेखक हुनुको अलावा एल्सा पुनसेटले टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ, जस्तै एल होर्मिगुएरो (२०१०), रेड्स (२०१२), वा ला मिराडा डे एल्सा, टीवीईको अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलको सेक्सन जसले व्यक्तिगत विकासको सौदा गर्दछ।
एल्सा पुनसेट: पुस्तकहरू जुन यसको लागि लायक हुन्छन्
तपाइँसँग यहाँ सबै एल्सा पुन्सेट पुस्तकहरूको बारेमा कुरा गर्नु धेरै बोरिंग हुनेछ, साथै तपाइँ हामीलाई एक पछि अर्को शीर्षक दिन थकित हुनुहुनेछ। अन्त्यमा, तपाईले पहिलेलाई बिर्सनु हुन्छ र केवल पछिल्लालाई सम्झनु हुन्छ।
र लेखकका धेरै शीर्षकहरू नभए पनि पाठकहरूको विचारका कारण र अरूले भन्दा केही राम्रो हुन सक्दछन् किनकि हामी विचार गर्छौं कि तिनीहरू जीवनको कुनै खास समयमा पढ्न लायक छन्। के तपाई उनीहरूलाई जान्न चाहानुहुन्छ? ध्यान दिनुहोस्:
एल्सा पुनसेट पुस्तकहरू: माली सिंह
हामी बच्चाको पुस्तकबाट शुरू गर्छौं जुन यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, यसले एक महान शिक्षा लुकाउँदछ। इतिहासले बताउँछ कसरी सिंहले चरालाई मित्र बनाउँछ; दुबै एक अर्काको रक्षा गर्दछन् किनकि सिंहले बन्दर र सर्पलाई खाडीमा राख्छ, चरालाई सुरक्षित राख्दछ; र यसले बदलीमा सिंहबाट टिकस हटाउँछ।
तर यदि शेरले एक जना गोप्य गोप्य कुरा बतायो जुन उसले कसैलाई भन्न चाहेको थिएन?
कडा, निःशुल्क र घुमन्ते: असाधारण समयमा बाँच्नका लागि प्रस्तावहरू
यो पुस्तक एल्सा पुनसेट द्वारा प्रकाशित अन्तिम मध्ये एक हो। यसमा उनले मानिसहरूलाई सहयोग गर्न खोज्दछन् जो ध्यान दिन्छन् कि उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको छ, उनीहरूको कुराकानी गर्ने तरिका, काम ... र प्रयास चिन्ता प्रबन्ध गर्न र हामीसँग रहेको समाजको प्रकारको लागि व्यक्तिलाई रूपान्तरण गर्नका लागि एक गाईडको रूपमा सेवा गर्नुहोस्।
यस्तो पुस्तक पढ्न नमिल्ने हो किनकि निश्चित रूपमा तपाईले त्यसमा वर्णन गरिएको केही परिस्थितिहरूको पहिचान गर्नुहुन्छ।
सानो क्रान्तिहरूको पुस्तक
पुस्तकले निर्दिष्ट गरे जस्तै, जब तपाइँ भोकाउनुहुन्छ, तपाइँलाई के हुन्छ थाहा छ। जब ऊ तिर्खाएको छ, उही। तर, के हुन्छ जब हामी दु: खी, निराश ...? धेरै पटक हामी ती भावनाहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भनेर जान्दैनौं र त्यसले हामीलाई दुःखी बनाउँछ।
तसर्थ, यहाँ लेखकले तपाईलाई यी भावनाहरूको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे मद्दत गर्न कोशिस गर्दछ, जस्तै तनाव, निराशावाद, विषाक्त वातावरण, डर, रीस जब कुनै चीजले हामीलाई दिक्क पार्छ, आदि।
एल्सा पुनसेट पुस्तकहरू: ब्रह्माण्डको लागि एक ब्याकप्याक
यसमा तपाईले धेरै प्रश्नहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन तपाईको जीवनको कुनै समय मा तपाईले आफैलाई सोध्नु भएको छ। उदाहरण को लागी, तिमीलाई थाहा छ हामी किन ईर्ष्या गर्छौं? हामीलाई खुशी हुन साथीहरू किन चाहिन्छ? वा हामी किन रुन्छौं? दैनिक प्रश्नहरू, जुन हामीले दिन-दिनको हिसाबले व्यवहार गर्छौं, र हामीले यो महसुस गरेनौं कि उत्तरले जीवन अझ राम्रो बनाउन सक्छ।
खजानाको खोजीमा डेयरडेभिलहरू
यो पुस्तक लस एट्रेविडोस संग्रहमा दोस्रो हो, र हामीले यो छनौट गरेका छौं किनभने यसले अनुभव गर्ने एउटा भावना आत्मसम्मान हो। धेरै बच्चाहरुले यो नहुने, वा कम भएकाले पाप गर्छन्, जसले तिनीहरूलाई केही गर्न सक्षम छैनन् भन्ने महसुस गराउँदछ। जात दिन प्रतिदिन सामना गर्न उनीहरूका आत्माहरू र शक्तिलाई प्रभाव पार्दछ: अध्ययन, मित्रता, आदि। यस कारणले गर्दा एल्सा पुनसेट र यस पुस्तकले आमाबाबु र बच्चाहरूलाई पनि बच्चाको आत्मसम्मान र भावनात्मक बुद्धिको सुधार गर्न संसाधन दिन खोज्छ।
एल्सा पुनसेट पुस्तकहरू: शुभ संध्या, बोबिब्ले!
यो पुस्तक नयाँ बच्चाहरूको स of्ग्रहको अंश हो जुन एल्सा पुनसेटले साना बच्चाहरूलाई केन्द्रित पुस्तकहरू जारी गर्‍यो। यसमा हामी एक "कुकुर" र बच्चा र मासु र रगत भएको एक जनालाई पाउँछौं, सबैजनाले उनीहरूलाई बोबिब्ली भन्छन्।
किताब के हो? राम्रो लागि साना बच्चाहरूलाई उनीहरूका केही भावनाहरूसँग व्यवहार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, वा दिनचर्याका लागि पनि, जस्तै यस अवस्थामा, ओछ्यानमा जाँदै।
अब तपाईको पालो भनेको एल्सा पुनसेटको किताबहरू तपाईलाई मन परेको वा तपाईको जीवन परिवर्तन गरेका किताबहरु लाई हेर्न। पक्कै छन्!
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » एल्सा Punset: हामी सिफारिस पुस्तकहरु